पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् : सिइओ ज्ञवाली – Nepal Press
२०७७ पुष ११ गते १६:२५
वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो ।
प्रस्तुत छ भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका विषयमा प्राधिकरण स्थापनापछि लामो समय प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ः
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा ढिला भइरहेको पुनःनिर्माण छिटो गर्न दक्ष निर्माणकर्मी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार परिचालन गरिएको छ । समस्या के हो त्यो ल्याएर समाधानमा सहयोग गर्न सामाजिक परिचालकले सहयोग गर्छन् । शहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गामा बनेका घरमा भाइभाइको आन्तरिक समस्या छ । त्यो समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न सक्दैन ।
बहुस्वामित्वले पनि शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । बहु स्वामित्वसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आएको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सहयोगस्वरुप अनुदानमा रु ३ लाख दिने हो । घर पूरै पुनःनिर्माण गरिदिने होइन । पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही आफैँले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरुले घर बनाउन थाल्नुपर्‍यो । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि बजेट अभाव हुन दिएका छैनौँ । घर बनाइसक्ने र बनाउन शुरु गर्नेको सङ्ख्या ९१ प्रतिशत नाघेको छ । एक स्थानको घर भत्केर लाभग्राही सूचीमा परेका तर अर्को स्थानमा घर भएकाले अनुदान फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
छानबिन हुन्छ । यसअघि ६ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे । जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिंदैनौँ । साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ । हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
धेरै समस्या समाधान गरेका छौँ । ऐलानीलगायत जग्गा समस्या समाधान भएको छ । बस्ती स्थानान्तरण आर्थिक उपार्जन हुनेगरी गरिएको छ । २९९ बस्तीका चार हजार ७२० परिवारलाई बस्ती स्थानान्तरण सुनिश्चित गरिएको छ । भूमिहीन लाभग्राही १२ हजार ७८८ को समस्या समाधान भई घर बन्ने सुनिश्चित भएको छ । १३० एकीकृत बस्ती बन्दैछन् ।
जोखिम वर्गका वृद्धवृद्धा अपाङ्ग, बालबच्चा, एकल महिला मात्र भएकालाई रु ५० हजार थप र प्राविधिक सहयोग दिएर पुनःनिर्माण अघि बढेको छ ।
पुरातात्विक सम्पदा पुरानै स्वरुपमा गुणस्तर उही हुने गरी बनाउनुपर्छ । खरीद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट रु १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु १ करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ ।
पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनःनिर्माण भएको छ । सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि शुरुमा ढिला भएको हो । धेरै सम्पदा चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीन स्वरुपमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुरानै स्वरुपमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
निजी आवास पुनःनिर्माणमा स्रोत अभाव हुन दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो बजेट आउने प्रतिबद्धता थियो । ४१० अर्ब आउने कुरा थियो । राहत र उद्धारको समेत यसमा रहेकाले अबको स्रोत २९४ अर्ब आउने हो । यसमा २३८ अर्ब सुनिश्चित गरिएको छ ।
पुनःनिर्माणमा दाताले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग शतप्रतिशत प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिएको छ । पुनःनिर्माणमा ९३८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । गत वर्षदेखि धेरै रकम कोरोनाभाइरसको उपचार आदिमा खर्च भएको छ । पछिल्लो समय विद्यालय, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा आवश्यक स्रोत प्राप्त हुनसकेको छैन ।
स्रोत सीमित भएकाले सडक, पुललगायत संरचना सरकारको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर पुनःनिर्माण गरिंदैछ । पुनःनिर्माणका लागि ४८८ अर्ब स्वीकृत भएको छ । हालसम्मको पुनःनिर्माणमा ३२५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । शिक्षण संस्था पुनःनिर्माणको काम प्राधिकरणको कार्यकालमै सक्ने गरी प्रयास भइरहेको छ ।
यस्तै गुनासो आएपछि शौचालय र खानेपानी संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ चालू आर्थिक वर्षमा । पुनःनिर्माण भएका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा छात्र एवं छात्राको अलग्गै शौचालय र खानेपानी पुर्‍याउने विषयलाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अघि लैजाँदैछ ।
स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ र यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
गैरसरकारी संस्थाले गरेका पुनःनिर्माणका कामको अनुगमन प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायले नगर्दा अपारदर्शी रुपमा खर्च एवं काम भएको गुनासो आएको छ नि ?
गैरसरकारी संस्थाले कार्यविधिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता गरी काम गरेका छन् । सम्झौतामै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले काम हेरेर प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । सम्झौताअनुसार काम गरेपछि अनुगमनले कार्य सम्पादन गरी प्रतिवेदन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पन्न भएका कामको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पनि पठाउनुपर्छ ।
गैरसरकारी संस्थाबाट ९० अर्बको काम गर्ने सम्झौता भएकामा ६२ अर्बको काम सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । गैससले गरेका कामको अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको छ ।
गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको प्रभाव नेपालमा बढेको छ । कोरोनाका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कति ढिला हुन्छ ?
सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सिंहदरबार, धरहरालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । सिंहदरबारमै ३०० जना कामदारले नियमितरुपमा काम गरिरहेका छन् । आगामी असारसम्म मात्र प्राधिकरणअन्तर्गत पुनःनिर्माणका काम गरिन्छ । साउनपछि लेखापरीक्षण, स्रेस्ता अन्तिम रुप दिइ सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण, अभिलेखीकरण गर्ने काम हुन्छ ।
अभिलेखीकरण गर्ने काम बृहत्तर रुपमा अघि बढेको छ । यसका लागि १०० वटा अनुसन्धान पत्र छ । पुनःनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभव भएका व्यक्तिले समेत अनुसन्धानपत्र लेख्नुभएको छ । यस्ता अनुसन्धानपत्र २५ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जर्नलमा प्रकाशित गर्न लागिएको छ । पुनःनिर्माणको यो अनुभवलाई संस्थागत रुपमा अभिलेखबद्ध गर्न लागिएको छ ।
वि.सं. १९९० को भूकम्पको अनुभवका रुपमा हामीसँग ब्रह्मशमशेरको पुस्तकबाहेक अरु केही छैन । यसैले वि.सं. २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको पुनःनिर्माणका अनुभव संलग्न अनुसन्धानपत्र, कागजातलगायत दस्तावेज हामी भावी पुस्ताले समेत अध्ययन गर्न सक्ने गरी सुरक्षित रुपमा राख्दैछौँ । यो विश्वकै ठूलो पुनःनिर्माण हो । हिमालमा तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न सकिंदैन । काम गर्न मिल्ने बेलामा स्रोत हुँदैन । आवश्यक मात्रामा बजेट पाउन सकेको भए अघिल्लो वर्षमै पुनःनिर्माण सकिने थियो । शुरुका वर्षमा पुनःनिर्माणका लागि जनशक्ति समेत थिएन । तालिम दिएर एक लाख दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन गरिएको छ । यसबीचमा नेतृत्व परिवर्तन भएपनि काम गर्ने गति परिवर्तन भएन । विभिन्न क्षेत्रका मानिसले गरेका अनुभव लगायत सबै विषय अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ ।
यी अनुभव समेटेर मैले कुनै बेला पुस्तक लेख्नेछु । धेरै कथा, व्यथा छ । धैर्य र लगनशीलताले परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । भूमिहीन, गुठी समस्या भएका लाभग्राहीका समस्या कानून परिवर्तन गरेर गरिएको छ । राष्ट्रिय परामर्श परिषद्मा सबै दलका नेता बसेर प्राधिकरणका कामको प्रशंसा भएको छ । विकास सहायता समितिले पनि प्रशंसा गरेको छ । गर्व गर्न लायक काम भएको समितिको ठहर छ । विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्राधिकरणले स्थापित गरेको छ ।
प्रकाशित: २०७७ पुष ११ गते १६:२५